केही मानिसहरुले नेपाललाई श्रीलंका बनाउन खोजेपनि उनीहरुको सपना पूरा गर्न दिन्न : अर्थमन्त्री शर्मा « News24 : Premium News Channel
केही मानिसहरुले नेपाललाई श्रीलंका बनाउन खोजेपनि उनीहरुको सपना पूरा गर्न दिन्न : अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अछामका पृथ्वीबहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले नै बार्गेनिङ गरेको आफूले सूचना पाएको खुलासा गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ’नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले अछामका पृथ्वीबहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले ३० हजार डलर माग गरेको सूचना पाएको बताएका हुन् ।
उनले राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचनाहरु राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरुले मिडियामा दिने गरेको आरोप लगाए । कुनै नागरिक समस्या परेर निवेदन दियो के रहेछ हेरिदिनुस् भन्दा मिडिया खोजेर त्यहाँ गोप्य कुराहरु किन पु¥याइन्छ ? भनेर प्रश्नसमेत गरे । यस्ता कुराले अनुशासन हुँदैन भन्दै मन्त्री शर्माले रिपोर्ट गर्नुपर्ने सूचना रिपोर्ट नहुने तर गोप्य कुराहरु मिडिया दिने काम भएको आरोप लगाए ।
उनले राष्ट्र बैंकमा बदमासी भइराखेको उल्लेख गर्दै एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको तर आधिकारिक कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए । यस्ता कुराहरु राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले सच्याउनु पर्ने बताए । मन्त्री शर्माले पछिल्लो १५ दिनमा बैंकहरुमा एलसी कतिले खोले भन्ने एकिन रेकर्ड माग गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार हो भन्ने सुनेको छु । हो पनि, कसैले मलाई फोन गर्दछन् यहाँ अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भयो भन्छ । के रे शेयर किन्ने पैसामा क्याप लाइसक्यो । ४/१२ गराइयो । किन गराएको भन्ने प्रश्न सोध्छ । अनि म गभर्नर साबलाई सोध्छु । के हो यो ? के गर्नू भएको हो ? के भन्ने हो ? मैले जवाफ सल्लाहकारलाई सोध्नु त प¥यो नी । सोध्न अन्त कहाँ जाने ?’
उनले थप भने, ‘कहिले काँहि बैंकको ब्याज बढ्छ । कनि बढ्यो ब्याज ? भनेर सोध्नु प¥यो । कहिले काँहि कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ । त्यो निवेदन के रहेछ हेरिदिनु प¥यो भने पछि मिडियालाई बुझाइन्छ । हस्तक्षेप ग¥यो अर्थमन्त्रीले भन्ने छ । ऐन कानूनले चल्ने हो । मन्त्री होस् वा कुनै संस्था होस् । कोही सम्बोधन गर्न आयो नदिने । मेरो बैंक खाता रोकियो भन्दा त्यो के हो बुझ्न दिनुस् भन्दा ठूलो विषय बनाएर मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरु त्यहा पु¥याइन्छ किन ? यस्तो अनुशासनले हुन्छ । कतिपय सूचनाहरु हुन्छन्, रिर्पोट गर्नु पर्ने रिर्पोट हुँदैन । बन्दमासी भइरहेको हुन्छ ।’
उनले फेरि भने, ‘एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई । ३० हजार डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको सञ्चालक समिति सदस्यले अनि हाम्रो यहाँ पारदर्शिता हुन्छ । यस्ता कुराहरु हामीले सच्याउनु पर्छ । हामीले केही समय एलसी नखोल्ने भनेका छौं । म आग्रह गर्न चाहान्छु । १० देखि १५ दिन यता कतिले एलसी खोले मलाई रेकर्ड चाहिन्छ । यो छलफल भएको १५ दिन भएको छ । एलसी कतिले खोले यो निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर सरकारले गर्ने हो ।’
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलना हुन नसक्ने बताए । उनले श्रीलंका र नेपालको ऋण, उत्पादन क्षेत्र, विदेशी लगानी र ऋण सहायताको कुरालाई हेर्दा समेत तुलना हुने कुरा नभएको बताए । मन्त्री शर्माले अहिले केही मानिसहरुले नेपाललाई श्रीलंका बनाउन खोजेपनि आफूले उनीहरुको सपना पूरा गर्न नदिने बताए ।
उनले विलासिताका सामान सरकारले धेरै छुट दिएकाले आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको बताए । उनले मुलुकमा नै उत्पादनका अथाह सम्भावना भए पनि उत्पादन बढाउने नीति बन्न नसकेको बताए । सरकारले बनाएका नीतिमा नै समस्या रहेको बताए । बनाएका नीति कार्यान्वयन क्षेत्रमा समस्या तथा नीतिको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार भएर यस्तो भयो भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्नू पर्ने मन्त्री शर्माले बताए ।